Privacy Notice - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ဤ privacy အသိပေးချက်သည် compro.miu.edu အတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်ကိုဖော်ပြသည်။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုသတိပေးချက်သည်ဤဝဘ်ဆိုက်မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါတို့ကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည် -
အဘယျသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆိုင်ရာအချက်အလက်များကအသုံးပြုသည်ကိုမည်သို့ကို web site ကို, မှတစ်ဆင့်ကြောင့် shared စေခြင်းငှါအဘယ်သူကိုအတူသင်တို့ထံမှကောက်ယူနေသည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်ရရှိနိုင်အဘယျသို့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရာအကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. သင်တုံ့ပြန်သင့်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အမိန့်တင်ပို့ရန်ဥပမာသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြဖြည့်ဆည်းရန်အဖြစ်လိုအပ်သောထက်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိမည်သည့်တတိယပါတီနှင့်အတူသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေမျှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဆီကတစ်ခုခုအနာဂတ်အဆက်အသွယ်များထဲကရွေးချယ်လိမ့်မည်။ သငျသညျကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအောက်ပါအချက်များကိုလုပျနိုငျ cshaw@miu.edu သို့မဟုတ် 641-472-7000 Ext မှာငါ့ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။ 4021:
သင့်ရဲ့ဒေတာများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်ရှိသည်ဆိုစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို။
ကျနော်တို့ (ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာကဲ့သို့) အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနေရာတိုင်း, သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံတဲ့လမ်းအတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ကိုကူးစက်နေပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဆာ၏အောက်ခြေတွင်တံခါးပိတ်သော့ခတ်အိုင်ကွန်ကိုရှာဖွေနေခြင်းသို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာရဲ့အစမှာ "https" ရှာနေဖွငျ့ဤအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကူးစက်သောအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ encryption ကိုအသုံးပွုရစဉ်တွင်, ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအော့ဖ်လိုင်းကာကွယ်ပေးသည်။ တိကျတဲ့အလုပ် (ဥပမာ, ငွေတောင်းခံသို့မဟုတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု) ဖျော်ဖြေဖို့သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သူကိုသာဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျသက်သေပြအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားသည့်အတွက်အဆိုပါကွန်ပျူတာများ / ဆာဗာများကိုလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထားနေကြသည်။
သငျသညျကြှနျုပျတို့သညျဤ privacy ကိုမူဝါဒဖြင့်လိုက်နာကြသည်မဟုတ်ဟုခံစားရလျှင်သင် 641-472-7000 Ext မှာတယ်လီဖုန်းမှတဆင့်ချက်ချင်းငါ့ကိုဆက်သွယ်သင့်သည်။ 4021 သို့မဟုတ်မှာအီးမေးလ်ကနေတဆင့် cshaw@miu.edu.